Cunaqabateyntii hubka oo mudo 1 sano ah Soomaaliya laga qaaday
Home Somali News Somali Government Xayiraadii Hubka oo Soomaaliya laga qaaday
Xayiraadii Hubka oo Soomaaliya laga qaaday
Kulan ay maanta yeesheen doowladaha 15 ka ah ee xubnaha joogtada ka ah golaha amaanka ee QM, ayay isku raaceen in mudo hal sano ah la qaado xayiraada hubka ee saarneyd Soomaaliya 22-kii sano ee lasoo dhaafay.
Wadamada golaha amaanka ee QM, ayaa ogolaaday in doowlada ay soo iibsan karto hubka fudud, taas badalkeedana laga mamnuucay iney adeegsato, gantaalada, diyaaradaha, iyo hubka cul culus, gaar ahaan Anti Tangiga.
Doowladaha Faransiiska iyo Britain, oo horay u diidanaa in laqaado xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya, ayaa ka tanaasulay fikirkaas, balse safiirka Britain ufadhiya QM, ninka lagu magacaabo Mark Lyall Grant, ayaa waxa uu sheegay in QM ay si gaar ah ula socon doonto sida hubkaas loo adeegsado iyo cida uu gacanta u gali doono.
Inkastoo wali uu socda shirka golaha amaanka ee QM, ay ka yeelanayan arimaha Soomaaliya, ayaa arinta ilaa iyo hada la xaqiijiyay in la ansixiyay waxa ay tahay, in mudo sanad ah Soomaliya laga qaaday Xayiraadii hubka, ee uu golaha amanka kusoo rogay 1991, xiligaasoo Soomaaliya ay weysay qaranimadeeda.
Doowlada Soomaaliya oo arintaan horay ucodsatay, ayaa aad usoo dahweyneysa tallaabadan waxayna u aragtaa ineey tahay fursadii Ciidanka Soomaaliya lagu hormarin lahaa, loogana maarmi lhaa Ciidamada ajnabiga ah ee hada doowlada garbaha haya.
Maamulada dalka kajira sideey u arkaan tallaabadan?
Inkastoo golaha amaanka ay mudo sanad ah qaadeen xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya, ayaa hadana waxaa jira maamulada qaar ee kajira dalka ineey arintaan si weyn uga soo horjeesteen.
Maamulka Soomaaliland, oo isagu horay ugu dhawaaqay inuu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale, ayaa hada sheegaya in go’aanka golaha amaanka maanta gaaray uu yahay mid lagu dag dagay, dhibaatana ay ka dhalan karto, waxayna sheegeen in taas micnaheedu yahay in iyaguna ay soo dagsan karaan hub.
Dhanka kale maamulka Puntland, ayaa dhankooda sheegay in xiligaan aysan munaasab ahayn in lagu dag dago qaadista cuna qabateynta, ilaa laga helayo waxay ugu yeereen doowlad federaalimnimadeeda lagu kalsoonyahay, saraakiisha iyo Ciidamadana ay noqdaan kuwo isku dhafan oo lasyku dheeli tiray.
Maamulka kale e Galmudug, ayaa qaba fikir ka duwan kan Somaliland iyo Puntland, waxaana madaxda maamulka Galmudug kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Gaalkacyo, ay ku sheegeen in qaadista xayiraada hubka ee Soomaaliya saarneyd mudada dheer ay lamicno tahay, in si buuxda loo hantay qaranimadii dalka ee luntay 22 sano kahor.
Xubnaha golaha amanka ee ka kooban 15-ka dal, islamarkaasna ansixiyay in laqaado xayiraada hubka ee Soomaliya, ayaa weli fadhiya xaruunta golaha amaanka ee New York, waxaana la rajeeynayaa in sidoo kale Caawa ay qalinka ku duugaan in sanadka xayiraada hubka laga qaaday Soomaaliya, in iyadana la ansixiyo in Soomaaliya ay kasii howlgalaan Ciidanka kasocda midowga afrika ee AMISOM, oo hada tiro ahaan lagu qiyaaso ineey kor udhaafayaan ilaa 17, 000 oo askari.
Go’aankan kasoo baxay golaha amaanka ee Soomaaliya looga qaaday xayiraada hubka ayay dad badan u arkaan ineey tijaabo utahay Soomaaliya, gaar ahaan doowlada Federaalka ee hada wadanka katalisa, sida ay hubkaas u maamuli doonto.